12 × 34 Podcast: Keynote Kuongorora WWDC 2021 | Ndinobva mac
12 × 34 Podcast: Keynote Kuongorora WWDC 2021
Nezuro rakanyatso kutamirwa isu tese tinoteerera nhau kubva kuApple nyika. Pane ino chiitiko kambani yeCupertino yaive ne chiitiko chakakosha chakagadzirirwa WWDC 2021 neese software software kune ako akasiyana masisitimu anoshanda.
Isu tese taive netariro yakakura yezvavaigona kuratidza nezve iPadOS neIOS izvo zvinowanzo kuve zvakanyanya mukurumbira nguva dzose, asi mune iyi nyaya nekusvika kweM1 processor kune iyo iPad Pro 2021 isu tese taitarisira kusvetuka kukuru mune iyi vhezheni, asi yanga isiri yezhinji ... ndinogona kutaura kuti takaita shanduko dzakakosha muSafari, muma macOS edu anodikanwa uye nemamwe masisitimu anoshanda asi kwete padanho rezvakaratidzwa gore rapfuura.
Ichi ndicho chinongedzo chekuti iwe upinde yedu YouTube chiteshi uye kuti iwe unogona kutiteverera mune inotevera episode gara kana iwe unogona kunakirwa nepodcast yakaburitswa mu iTunes nokuti teerera pairi chero nguva uye chero kwaunoda. Kana iwe uine chero mibvunzo kana mazano uye iwe uchifunga kuti tinogona kutaura nezvazvo pane podcast, unogona kuzviita kurarama kuburikidza nehurukuro inowanika paYouTube, uchishandisa hashtag #podcastapple pa Twitter kana kubva teregiramu yedu chiteshi Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ndeye mahara kune wese munhu uye isu tiri vakawanda uye vazhinji.
Uye zvakare isu tinofanirwa kutenda vese varipo kukambani yako mune izvi zvakakura kukura senge zuro matakakurukura chiitiko cheWWDC 2021. Vazhinji vashandisi ndivo vanosangana mhenyu uye vanotibvunza isu zvakananga nezvenhau dzetekinoroji yeApple, zvigadzirwa zvayo uye zvakare mimwe misoro isina kuenderana zvakananga neApple. Zvechikwata zviri chaizvo mufaro wekugovana idzi nguva neweIsu tinovimba kuti ino nzanga yevashandisi iri kuramba ichikura zuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » 12 × 34 Podcast: Keynote Kuongorora WWDC 2021
MacOS Monterey uye iPadOS 15 Inounza Yakadzika Simba Mode kuMac uye iPad
Apple Watch mhando dzinoenderana neWatchOS 8